ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များမော်ကွန်း - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
သြဂုတ်လ 6, 2019 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by cre8or
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Sun-Ling-at-Google-from-Sun-Ling.png 800 1200 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-08-06 21:09:152019-09-26 21:43:16Google ကဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကျေးလက်ဒေသတရုတ်လယ်ယာအပေါ်ကြီးပြင်း
Bereket Babiso: mum မှာ ComPro ပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2019 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by cre8or
Bereket Babiso ပြင်သစ်အတွက် software ကို developer အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ ကွန်ပျူတာပညာရှင်များမဟာဘွဲ့အစီအစဉ် (ComPro)။ သူကလက်ခံခဲ့သည်နှင့်ဇန်နဝါရီလ 2018 စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရပါတယ်, လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
Bereket ကြောင်း mum မတူကွဲပြားမှုကျင်းပသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်, လူတိုင်းရှိသမျှသောလောကီထောင့်ကနေတခြားသူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုသိရန်ရရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ကိုရှာဖွေကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူကသင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံ, အကြောင်းအရာနှင့်သင်တန်းများကိုအပ်နေသောလမ်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ သူကအကြောင်းအရာကလက်ရှိဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းစျေးကွက်နည်းပညာများအပေါ်မှာအခြေခံခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့ feature ကိုကျောင်းသားများ Transcendental Meditation® technique ကိုကငျြ့သုံးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Bereket TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာကွန်ပျူတာပညာရှင်များ-သင်စိန်ခေါ်မှုစီမံကိန်းများကိုကလာသောမကျေနပ်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးသည်နှင့်မဆိုအခြေအနေမှာစိတ်ဖိစီးမှု-ပေးတိုးတက်လာသောအာရုံစိုက်ခြင်းမှကယ်ဆယ်ရေးခွင့်ပြုဘို့အလွန်အကျိုးရှိသောကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်လိုက်ပါ BEREKET'S ဗွီဒီယို>
On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများရှစ်လအတွင်းပြီးစီးပြီးနောက် Bereket မီချီဂန်များတွင် Ford Motor Company နဲ့ software ကို developer အဖြစ်ပေးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ခဲ့သည်။
Bereket မှအဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာနည်းပညာများသင်ယူလိုသောမည်သည့်အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြံပေး လျှောက်ထား mum မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS ရန်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Bereket-1.jpg 1080 1920 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-01-03 22:35:092019-01-03 22:47:44Bereket Babiso: mum မှာ ComPro ပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2016 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားအတွက်ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေပထမဦးဆုံးနှစ်အားကစားသမားအများပြည်သူအာရုံစိုက်မှုအများကြီးလက်ခံရရှိသည်။ အဆိုပါအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အမေဇုံထဲမှာထိပ်ပိုင်း "လူသစ်" သဘင်ရှိပါတယ် Amarbayar (Amar) Amarsanaa.
အမေဇုံပြည့်စုံ Technologies က DevOps (ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Operations) အသင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွင်, Amar အမည်ရှိ "ဟုအဆိုပါလ၏တွဲဘက်" ရန်သူ၏အလှူငွေ၏အသိအမှတ်ပြုမှု, နှင့် Software Development အင်ဂျင်နီယာချုပ်တစ်ဦးအပေါ်သက်ရောက်မှုသူများက၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြဿနာများကိုလျှော့ချတဲ့အခါမှာသူကထောက်ပံ့ခဲ့သည် (SDE) သင်းအတွက် 86% ။ သူလည်း DevOps IV မှရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်!
Amar အဆိုအရ, ကျနော်တို့ (အမေဇုံ) ကိုမြေကြီးတပြင်ရဲ့အများဆုံးဖောက်သည်ဗဟိုပြုကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့ကွိုးစားအားဆက်လက်အဖြစ် "စစ်ဆင်ရေးအတွက်ထူးချွန်, ငါ၏အလုပ်ရှင်အလေးအနက်ထားအချိန်ယူတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ရုံတီထွင်ဆန်းသစ်, အဆောက်အဦးများနှင့်စတင်မှာကိုရပ်တန့်ကြပါဘူး - ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများ, ထိရောက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, မရရှိနိုင်ပါနဲ့တိကျမှန်ကန် optimized သေချာပါစေ။ ဤအအစီအစဉ်များကိုကွပ်မျက်တှငျကြှနျုပျတို့ကို manual ထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, အလုပ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်အခြားသူများ '' အချိန်ကုန်သက်သာဖို့ကအလိုအလျောက်ရန်ပဏာမခြေလှမ်းယူပါ။ "
မကြာသေးမီက Amar အင်ဂျင်နီယာများကကိုယ်တိုင်ပြုသောအမှုခဲ့သောဒေတာစုစည်းပြီး၏ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်အားမိမိအသင်းအပေါ်အခြားအင်ဂျင်နီယာအတူတက်ပူးပေါင်း။ ဒါဟာအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်ကိုယခုမိမိတို့အသင်း '' ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်ထူးချွန်မောင်းထုတ်ရန်အင်ဂျင်နီယာများ, SDE အဖွဲ့များနှင့်မန်နေဂျာတို့ကအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအလိုအလျောက်တစ်ပတ်ကို, အင်ဂျင်နီယာနှုန်း 2-3 နာရီကယ်တင်နှင့်ကျယ်ပြန့် 12 + အဖွဲ့များနှင့်ရေတွက်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်အိန္ဒိယထံမှအဖွဲ့များအပါအဝင်အောက်တိုဘာလ 2016 အဖွဲ့အစည်းကအစည်းအဝေး, စဉ်အတွင်းအမေဇုံခေါင်းဆောင်မှု, သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, Amar နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှုးချီးမြှင့် "စစ်ဆင်ရေး Excellence" ဆုချီးမြှင့်။ တစ်ဘို့အတော်လေးဂုဏ်အသရေ "လူသစ်!"
Amar အမြဲခရီးသွားလာရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာပိုလန်အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ရန် 14 မှာမိမိဇာတိမွန်ဂိုလီးယား left နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူကကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့်အတူဒင်းရဲ့စာရင်းအပေါ်ဘွဲ့ရတဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်အတွက်စာရင်းသွင်း။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုသမ္မတကသူ့ကိုအမည်ရှိ တစ်နှစ်တာထူးချွန်ကျောင်းသား။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသူလည်းစန္ဒယားနှင့်ဂစ်တာကစားခြင်းအတွက်လွန်ကဲ။
ကောလိပ်ကျောင်းပြီးနောက် Amar အမည်ရှိ တစ်နှစ်တာဝန်ထမ်း မြောက်ဒါကိုတာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ, တစ်ဦးဓာတ်ပုံဆုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အောက်ပါဓါတ်ပုံသရုပျဖျောအဖြစ်, Amar ဟာသတစ်ခုသဘောမျိုးနဲ့အရည်အချင်းနှင့်အောင်မြင်သောဓာတ်ပုံဆရာပါ!
နောက်ပိုင်း, ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဘွဲ့ရကွန်ပျူတာကွန်ယက်အစီအစဉ်တွင်လေ့လာနေစဉ်, သူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ mum မာစတာရဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်။ Amar သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, mum မှာထှနျးအစားအစာနှင့်အရည်အသွေးလူနေမှုအခြေအနေများအားဖြင့်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
Amar ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ (ComPro) Program ကိုလျှောက်ထားသူလည်း mum ကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုနေထိုင်သူအကြံပေးများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိရာဇွန်လ 2014 အတွက် mum မှာအတန်းစတင်ခဲ့သည်။
Amar အဆိုအရ "ဟုအဆိုပါ ComPro အစီအစဉ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပညာရေး၏အရည်အသွေးထူးချွန်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်မှသာဒြေလုပ်ပေးကျောင်းသားများကိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနေကြသည်စိတ်ချပါနိုင်ပါတယ်နိုင်အောင်, ထူးခြားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းနောက်ခံရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေအပေါ်အမြဲ Up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဖွဲ့သည်စီမံကိန်းများကျောင်းသားများ, ပူးပေါင်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်ပါမောက္ခများကချမှတ်သည့်အလွန်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်တင်ဆက်ဖို့အဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုတက်စေ -, နေ့ရဲ့အဆုံးမှာကျနော်တို့အစိုင်အခဲစီမံကိန်းကိုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူထွက်လာ အရာ Intern များကိုရှာဖွေတာအတွက်ကူညီပေးသည်။ "
Lအဆိုပါ mum ကျောင်းပရဝုဏ်အပေါ်အီဖေး
"Academic သည် ComPro အစီအစဉ်ကိုယင်း၏ကျောင်းသားများအတွက်မြင့်သောစံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်။ သူတို့အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်သည့်အခါကျောင်းသားများကပညာရေးဆိုင်ရာအသက်တာ၏စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ယူနိုင်အောင်စုစုပေါင်းကျောင်းသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတထောကျပံ့ဖို့, mum, အလွန်သက်သာခြင်းနှင့်ထှနျးလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေးပါသည်။ ပြည်သူ့အလုပ်ကိုဘဝဟန်ချက်အကြောင်းပြောဆို, ငါ mum မှာပညာသင်နှစ်အလုပ်နှင့်ဘဝ၏ချိန်ခွင်လျှာငါ mum မှာနထေိုငျအကြောင်းကိုအများဆုံးခံစားဘာလဲ ... စုံလင်ခြင်းရှိ၏ခံစားရတယ်။ "
အဆိုပါ Transcendental Meditation®နည်းစနစ်သင်ယူခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
"ငါသည် mum ကို ရွေးချယ်. နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းလုပ်နေတာများ၏အခွင့်အလမ်းခဲ့ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို (TM) ။ TM အလိုအလျောက်တက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အပေါ်အခြေခံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တှေးအချေါနှငျ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်, သင်၏စွမ်းအင်အဆင့်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ငါကမြင့်မားလေးစားမှုရှိသည်။ ငါ့အဘို့ TM အလိုအလျောက်၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကငါ့ကိုအနားယူကူညီပေးသည်ကြောင်း, ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုမရှိပဲပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာဖြေရှင်းချက်ထဲမှာရရှိလာတဲ့, ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများအပေါ်ပြတ်သားအာရုံစိုက်ပြီ"Amar ကပြောပါတယ်။
ဆီယက်တဲလ်ဧရိယာထဲမှာအမေဇုံ & ဘဝမှာအလုပ်သင်
ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါအတွက် On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများရှစ်လအတွင်းပြီးစီးပြီးနောက် Amar ဆီယက်တဲလ်, ဝါရှင်တန်ရှိအမေဇုံပြည့်စုံ Technologies ကအတူ DevOps အင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်သူ၏သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) အလုပ်သင်လုပ်ဖို့ 2015 အတွက်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ သူဟာသဘာဝအပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ထွက်အလုပ်လုပ်, ဓာတ်ပုံပညာ, ဂီတ, နှင့်ထိုက်တန်အကြောင်းတရားများအတွက်လူမှုရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်လိုက်ရှာရှိရာပစိဖိတ်အနောက်မြောက်, နေထိုင်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။
Amar ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်သူ၏အချိန်ခံစားခဲ့ရ: "mum မှာဤမျှလောက်များစွာသောအားသာချက်များရှိပါသည်။ ငါက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါပြီဖို့အလွန်အမင်းကံကောင်းနှင့်အခွင့်ထူးခံခံစားရ: အနိမျ့ရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်ထူးချွန်ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ထူးခြားတဲ့ဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများ, အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆက်ကပ်အပ်နှံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမဟာဗျူဟာများအတန်းအစား (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပြန်လည်စတင်, အင်တာဗျူး prep, လှောင်ပြောင်-up, အင်တာဗျူး, အလုပ်ရှာဖွေနည်းစနစ်), ပြည်တွင်းရေးအလုပ်တရားမျှတတဲ့ကွန်ရက်အော်ဂဲနစ်အစားအစာများ, အဆင်ပြေလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်, အားကစားအဆောက်အဦ, ဖြစ်ရပ်များ, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကလပ်အသင်း။ Intern များကိုအဘို့နှင့်အများဆုံးအထူးသ, 99% နေရာချထားမှုနှုန်း! "
"ထိုကြောင့်, ကျနော်ကျိန်းသေဤကွီးစှာသောအခွင့်အလမ်းအားသာချက်ယူဖို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျောင်းသားများနှင့်အလုပ်လုပ်ပညာရှင်များအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ယင်းဝင်ခွင့်များလိုအပ်ချက်အထဲက Check, သင်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်ကျော်လွန်သေချာအောင်နှင့်လျှောက်ထား!
စိန်ခေါ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သင် ComPro အစီအစဉ်မှရလိမ့်မယ်အားလုံးအပြုသဘောရလာဒ်ကိုင်စွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် mum မှာ US မှာအောင်မြင်မှုရဘို့, သငျသညျအလှနျကောငျးအင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်! "
"ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲဆက်လက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အမေဇုံမှာကြီးထွားလာအပြင်, ငါကလူရင်ဆိုင်ရသည်ထိုနေ့-to-နေ့ကပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာကြီးကို impact မှမြော်လင့်လျက်ဖြစ်နိုင်သည်မိတ်ဆွေများနှင့် / သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကုမ္ပဏီစတင်။ "
"ကျွန်မကိုလည်းလီး၏နောက်သားစဉ်မြေးဆက်နည်းပြများနှင့်လမ်းညွှန်မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးဖို့, ယနေ့ငါ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုအတူတူ non-profit ဒေသများပါဝင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
"ငါသည်ဤဒီဇင်ဘာလဘွဲ့ရလိမ့်မည်။ ငါ ComPro ကျောင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းကဒါဟာပြောင်းလဲနေသောနှင့်အကြိုးစီးခဲ့သည်။ ငါ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အတွက်လွန်စွာကူညီပေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အကြိုက်ဆုံးသင်တန်းများတစ်ခုမှာဒေါက်တာ Guthrie နှင့်အတူအဆင့်မြင့် Software Development ခဲ့ပါတယ်။ "
"ငါသည်အစဉ်အမြဲငါ mum မှာကြှနျတေျာ့ကြောငျးသားဘဝစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြလူတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။ ငါလှပသောသဘာဝအ mum ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အချို့သောအံ့သြဖွယ်အသက်ရှင်-ရှည်လျားမိတ်ဆွေများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏, ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက် ComPro ကျောင်းသားများ, ဒြေနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်လာမယ့်နွေဦးဟာတင်သည့်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ငါမိခင်၏အမည်စှဲဆက်လက်မည်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူ ComPro alumnus ဖြစ်လိမ့်မည်! "
Amar ကသူ၏အသက်တာကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခိုက်မှာသူတို့ရဲ့မဆုပ်မနစ်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ခံမှုများအတွက်သူ၏မိဘများကျေးဇူးတင်လို, သူသည်ယနေ့သူသည်ဖြစ်ဖို့သူ့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ဘို့လိမ့်မယ်။ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေနှုတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား!"
မှတ်ချက်: Amar အမေဇုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြပြီးသေချာပေါက် Amazon ရဲ့အနေအထားကိုကိုယ်စားပြုကြပါဘူး။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Amarbayar-Amarsanaa..jpg 768 1366 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-11-11 18:55:312019-05-31 10:57:39mum ကျောင်းသား International Amazon ကဆုချီးမြှင့်ဆွတ်ခူး
America မှာအသိပညာ, လေးစားခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိမှု
ဧပြီလ 23, 2016 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
များစွာသောမွတ်စလင်များနှင့်အခြားလူနည်းစုအုပ်စုများအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စိန်ခေါ်ခံစားကြသောအခါတစ်ကြိမ်, ဒီမှာအမေရိက၏ဗဟို၌တည်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်အတွက်ဘာသာရေးသည်းခံစိတ်, ရိုသေလေးစားမှုနှင့်လက်ခံမှုကိုတစ်ဦးနှလုံး-နွေးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။
2014 အဲဂုတ္တုပြည်၌သူ၏အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အဆုံးရှုံးပြီးနောက်, မိုဟာမက် Sami တစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။
တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်သခင်၏အစီအစဉ်အတွက်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေနေခုနှစ်တွင်မိုဟာမက်ကသူ့လိုအပ်ချက်-The အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြည့်ရှုသော program တစ်ခုကိုတွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ် (မနီးမဝေးအလယ်ပိုင်းမြောက်ဘက်အမေရိကန်ချီကာဂိုကနေ) ။
[သတင်းလွှာ၏အဆုံးမှာမိုဟာမက်ရဲ့စောင့်ကြည့် ဗီဒီယို မိမိအ mum အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကို။ ယခုပင်လျှင်ထက်ပိုနေဖြင့်ကြည့်ရှုအားပေး 1,600,000 Facebook တွင်လူပေါင်း!]
ကြှနျုပျတို့၏ website သုံးသပ်ခုနှစ်တွင်မိုဟာမက်တက္ကသိုလ်အတွက်လူတိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေး-The တိုးမြှင့်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်ကျင့်ကြောင်းကိုသိမြင် Transcendental Meditation® technique ကို(TM) ။ ဤသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သလိုပဲ, ဒါကြောင့်မိုဟာမက်အချို့သောသုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်နှင့် TM အလိုအလျောက် technique ကိုဆုံးမသွန်သင်သည်အဘယ်မှာရှိကိုင်ရိုမှာရှိတဲ့အလယ်ဗဟိုရှိကွောငျးသိခဲ့ရတယ်။
သူကတစ်ဦးအခမဲ့မိတ်ဆက်ဟောပြောပွဲသို့တက်ရောက်အများအပြားမေးခွန်းများကိုမေးသော်, နှင့်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။ သူကသူ့မွတ်စလင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု, အဖြစ် mum သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူတန်ဖိုးထားလျက်, ရိုးရှင်းသော 7-Step TM အလိုအလျောက်သင်တန်းယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Transcendental တှေးတောဆငျခွသင်ယူခြင်းအပေါ်မှာ၎င်း, မိုဟာမက်ကိုသူမျှော်လင့်ထားဘယ်တော့မှအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပီတိအံ့သြသွားတယ်။ သူ့အလုပ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက်သူစိုးရိမ်, တင်းမာနေဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့်လလောက်ကောင်းကောင်းမအိပ်နိုင်ဘူး။ အစအဦး TM အလိုအလျောက်၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲမိုဟာမက်ကသူ့အတှေးအချေါအတွက်ရှင်းလင်း, သာယာတဲ့ပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းခံစားခဲ့ရပိုပြီးအကောင်းမြင်နှင့်မကြာမီနောက်တဖန်ကောင်းစွာမအိပ်နိုင်ပဲ!
မိုဟာမက်အရ "TM အလိုအလျောက်ငါ့ကိုအသက်တာ၌ငါရှိသည်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်ကစိတ်တစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားရဖို့ကူညီပေးခဲ့။ အစဉ်မပြတ်ငါ (ADD) Attention Deficit Disorder နှင့်အတူပြဿနာများကိုခဲ့ငါ့ကိုအာရုံစိုက်ကူညီဖို့ဆေးဝါး ADD နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချယူပြီးပါပြီ။ TM အလိုအလျောက်ငါတဖန်ငါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အခြေချကြောင့်ငါ့ကိုဆေးဝါးများ၏သောက်သုံးသောလျှော့ချကူညီပေးခဲ့သည်။ TM အလိုအလျောက်ငါ့ကိုလည်းအလုပ်မှာတစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်အဆင့်မှာ, ငါ့လေ့လာမှုများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, function ကိုဖြေရှင်းကူညီပေးခဲ့တယ်။ "
Transcendental တှေးတောဆငျခွ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြေးဇူးတငျကွောငျးနှင့်အတူ, မိုဟာမက်ကိုတွေ့ ပို. ပင် ဖိတ်ခေါ်. -အနိမ့်ကနဦးကုန်ကျစရိတ်, ကျယ်ပြန့်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ, စက်မှုလုပ်ငန်းတိမ်းညွတ်, သဟဇာတနှင့်ကွဲပြားခြားနားကျောင်းဝင်းအသိုင်းအဝိုင်းထိပ်တန်းဒြေနှင့်အပြည့်အဝနှင့်အတူဖွင့်ဖို့ကိုနှစ်နှစ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ် mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များက MS အစီအစဉ် သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့သင်တန်း (CPT) အလုပ်သင် -paid။ မိုဟာမက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထား၏။ သူကလက်ခံခဲ့သည်နှင့်မေလတွင် 106 အတွက် 18 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 2015 အခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူကျောင်းအပ်ရန်ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါဖို့သူ့ဇနီးနာတာလီ Samir နှင့်အတူခရီးထွက်ခဲ့ပါသည်။
15 နှစ်ပေါင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုထက်ပိုအတူဝါရင့် software ကို developer အဖြစ်, မိုဟာမက်ပေါ်-ကျောင်းဝင်းအတန်းသူ့ရဲ့ရှစ်လအတွင်းမှာပိုပြီးသင်ယူဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်သက်တော်မူ၏စေရန်, တိုင်းအတန်းထဲတွင်သူ (MIT ကနေပါရဂူဘွဲ့နှင့်တသားတအပါအဝင်) အလွန်အရည်အချင်းပါမောက္ခထံမှအဖိုးတန်သစ်ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံအသိပညာသင်ယူခဲ့တယ်။
မိုဟာမက်နှင့်နာတာလီသူတို့အများကြီးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နောက်ခံမှလူအပေါငျးတို့သညျအလှနျပူနွေးခြင်းနှင့်ကြိုဆိုပွဲမိသားစုကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အတူတကွနေထိုင်နေရှာတွေ့ဘယ်မှာဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါအတွက်လှပတဲ့ mum ကျောင်းဝင်းအပေါ်အိမ်မှာခံစားရတယ်။ က Intern များကိုလျှောက်ထားဖို့အချိန်ရောက်လာသောအခါ, သူတို့ကဒီမှာဖဲရ်ဖီးလ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သင်တှေ့ရရန်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဂျင်မ် Garrett ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပြူတာအလုပ်ရှာဖွေရေးစင်တာသင်တန်းနှင့်နည်းပြ၏ဒါရိုက်တာ၏အကူအညီနှင့်အတူ, မိုဟာမက်ဖဲရ်ဖီးလ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသနကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းသိလာတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြင့်မားသောအဆင့်, အတွေ့အကြုံရှိလုပ်ငန်းဗိသုကာများအတွက်ဖွင့်ပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်နှင့်တည်နေရာမိုဟာမက်သူပြီးသားအခြားမြို့အတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ချင်ပါတယ်ထက်သူပင်လျော့နည်းပိုက်ဆံအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောသည်ကြောင်း, ဒါကြောင့်စံပြခဲ့ကြသည်။ မိုဟာမက်ရဲ့အံ့အားသင့်ဖို့, ဖဲရ်ဖီးလ်ကုမ္ပဏီသူတို့သူ့ကိုအခြားကုမ္ပဏီထက် ပို. ပင်ပိုက်ဆံလှူသောထိုသူကိုထိုကဲ့သို့စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကိုသင်ယူခြင်းနှင့် mum, မိုဟာမက်မှလာမယ့်မတိုင်မီကမိမိအခွအေနကေိုသူ၏ခိုင်ခံ့သောမွတ်စ်လင်သောယုံကြည်ခြင်းနှင့်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ သူဟာလျင်မြန်စွာ Transcendental တှေးတောဆငျခွများနှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာများအကြားအဘယ်သူမျှမဆနျ့ကငျြရှိကွောငျးသဘောပေါက်လာတယ်။ သူ TM အလိုအလျောက်ဘာသာတရား-အဲဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်နက်ရှိုင်းသောအရာကြွင်းသမျှတွေ့ကြုံဘို့ရုံ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဖွင့်ကြွင်းသောအရာ၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်အထိကြုံနေရ, အာရုံရှိပါသည်။ TM အလိုအလျောက်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘယ်အရာမျှရှိပါတယ်။
မိုဟာမက်ကသူ့ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အလွန်လေးစားမှုဖြစ် mum မှာလူတိုင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ မွတ်စလင်ကျောင်းသားများကျောင်းဝင်းအပေါ်တစ်ဦးအသေးဗလီမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, နှင့်အခြားကျောင်းသားများကိုအနီးအနားရှိတစ်ခါတစ်ရံအခါသူတို့သည်လည်းအဆင်ပြေပွုပဌနာခံစားရသည်။ ကျောင်းသားများဟာသူတို့ရဲ့မနက်စောစောအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
မိုဟာမက်, ဖြည့်စွက် "mum လူအားလုံးလက်ခံသောနေရာတစ်နေရာဖြစ်တယ်, တခြားသူတွေရဲ့လက်ခံခြင်းခံရဖို့လူတွေကိုသင်ပေးတယ်။ ကျွန်မမွတ်စ်လင်အဖြစ်ကဒီမှာလာမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မပိုမိုနက်ရှိုင်းနျဖိုးထားနှင့်နားလည်မှုအစ္စလာမ်ဘာသာ၏အဖြစ်အစ္စလာမ်နှင့်ဘာသာတရားအားလုံးကိုတွေ့သမျှသောတစ်လောကလုံးအမှန်တရားတွေပိုမိုအသိပညာရရှိခဲ့ပြီ။ "
မိုဟာမက်ကရှင်းပြသည်, "စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်လာရန်အလွန်ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင်န်းကျင်အရာအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးနက်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ရန်သင့်အားဖွင့်, သင်၏အသက်တာအကြောင်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းရှုထောင့်ရဖို့။ ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသက်အဘို့ဤအလေးနက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန် mum ဝင်ခွင့်များကိုဆက်သွယ်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်သူတို့၏အသက်တာ၌လာမည့်ခြေလှမ်းစတင်ရန်လိုသူမည်သူမဆိုအကြံပြုသည်။ "
မိုဟာမက်သူနှင့်နာတာလီ (လည်းယခု TM အလိုအလျောက်ကျင့်) စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှပျော်မွေ့အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းအခြားသူတွေ TM နှင့် mum အကြောင်းကိုသိစေရန်လမ်းအဖြစ်, မိုဟာမက်အထူးဖန်တီးထားပါတယ်7မိနစ်တွင်ဗီဒီယို ဤနေရာတွင်မိမိအတှေ့အကွုံမြားဖော်ပြ။
မိုဟာမက်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောတတ်သော်လည်း, သူသည်အာရဗီစကားပြောကမ္ဘာအနှံ့ကလူကသူတို့ကိုမှမရရှိနိုင်ပါသောအရာကိုတန်ဖိုးထားနိုင်အောင်, အင်္ဂလိပ်ခွဲများခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအာရဗီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခွဲများခေါင်းစဉ် Non-Arabic အဘိဓါန်ပီခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကဗီဒီယိုလွယ်ကူသောပါစေ။
မိုဟာမက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုသိရန်လိုပေမည်သူကိုတခြားဆော့ဗ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှဖို့မင်္ဂလာရှိ၏။ အဆိုပါ "ComPro" အစီအစဉ် 20 နိုင်ငံများမှနီးပါး 2000 ဘွဲ့ရနှင့်အတူ၎င်း၏ 78th နှစျတှငျယခုဖြစ်ပါတယ်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_04-02.jpg 173 300 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-04-23 19:00:532019-05-31 10:56:44America မှာအသိပညာ, လေးစားခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိမှု
DevFest 2015 ဆော့ဝဲပြိုင်ပွဲအောင်မြင်မှု
ဇန်နဝါရီလ 23, 2016 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
အခါစာသင်ကြီးစွန်းအများဆုံးတက္ကသိုလ်များမှာ, ကျောင်းသားများမိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကျောင်းဝင်းထားခဲ့ပါ။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်လက, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှ 85 ဘွဲ့ရကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုခေါ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ software ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အပိုဆောင်း7နေ့ရက်ကာလအဘို့ကျောင်းဝင်းအပေါ်နေဖို့ဖို့ရွေးချယ် DevFest 2015.
အတန်းဒီဇင်ဘာလ၌အဆုံးသတ်ပြီးနောက်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မြှင့်တင်ရန်သစ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု tools တွေကိုထုတ်လုပ်ဘို့၎င်း၏ပထမဆုံး hackathon ကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်ကျင်းပ Maharishi Ayurveda * ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ တစ်ခုပျော်စရာနဲ့ပြည့်စုံရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျောင်းသားပေးနေချိန်မှာ DevFest ၏ရည်မှန်းချက်အမျိုးမျိုးနည်းပညာအမျိုးအစားများနှင့်ပုံစံများ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု tools တွေကို generate ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ DevFest ကိုစနစ်တကျ 7-နေ့၌-ကျောင်းဝင်းအဖြစ်အပျက်ကြီးနှင့် Maharishi Ayurveda အတွက်ပညာရေးမှ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစီမံကိန်းကိုစိတ်ကူးများ၏မျိုးဆက်အထိလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သည်, ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ကုန်များ၏ development team ရန်နှင့်အကဲဖြတ်များအတွက်နောက်ဆုံးတင်ပြချက်။
ပြိုင်ပွဲတရားသူကြီးမှတ်စာ: ဒင်း Greg Guthrie (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ), ပါမောက္ခရှင်ပေါလု Morehead (ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ကျန်းမာရေး) နှင့်ပါမောက္ခအန်ဒီ Bargerstock (စီမံခန့်ခွဲမှု)
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန 85 ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကို 14 စီမံကိန်းများကိုနေသူများကဖန်တီးပေးသောဒြေ-နည်းပြအဖွဲ့များသို့ခွဲထွက်နှင့်ထိပ်တန်းသုံးသင်းသိသိသာသာငွေသားဆုများဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်နှင့်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောပညာရေးနှင့်အစားအသောက်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးနှံများကို, နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ: အဆိုပါစီမံကိန်းများကိုအများအပြားအမြင်များထံမှ Maharishi Ayurveda အမှာစကားပြောကြားသည်။ ဖြေရှင်းချက်ထိုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့မိုဘိုင်း / FaceBook App များအဖြစ် tools များမှတဆင့်အဆိုပါအထွေထွေလူထု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အဖြစ်ကျန်းမာအတိုင်ပင်ခံတွေ့ဆုံရန်အဆိုပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်စီမံကိန်းများကြိုတင်သတ်မှတ်ထားအကဲဖြတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီတင်ပြချက်များပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့သူသုံးအကြီးတန်းဒြေတရားသူကြီးတစ်ဦးထင်ပေါ်ကျော်ကြား panel ကိုအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ အဆိုပါစံသတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်း:
စီမံကိန်း Market ကဆွဲဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးအဆင်သင့်
Maharishi Ayurveda နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေး
အဆိုပါအနိုင်ရအဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏များအတွက် $ 1000 အနိုင်ရ Ayurvedic စားဖိုမှူး web application ကို။ $ 600 ယင်းမှချီးမြှင့်ခဲ့သည် AgriVeda အဖွဲ့နှင့်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဒဘဝ အဖွဲ့အိမ်မှာ $ 300 ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများတစ်ဦးအရှိဆုံးပျော်စရာအဘို့အစီစဉ်များနှင့်တရားသူကြီးများ, ပညာရေးနှင့်ပျော်စရာ-ဖြည့်အတှေ့အကွုံမှဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြင် ဓာတ်ပုံများ အဆိုပါ7ရက်ကြာယှဉ်ပြိုင်မှုကနေ။
DevFest စည်းရုံးရေးမှူးဒေါက်တာ Anil Maheshwari ရလဒ်ကိုကျေနပ်ခဲ့တယ်: "ကျနော်တို့ကအောင်မြင်စွာ mum ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုအဘို့ဤပျော်စရာသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကမိတ်ဆက်ကြဝမ်းသာကြသည်။ သူတို့ဟာ Maharishi Ayurveda အကြောင်းကိုတန်ဖိုးရှိသောကျန်းမာရေး-ပေးခြင်းအသိပညာလေ့လာသင်ယူ, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါနည်းပညာအသစ်-based tools များဖွံ့ဖြိုးမသာ။ သိသာထင်ရှားသောဆုနောက်ထပ်မက်လုံးပေးခဲ့သည်။ "
ဒင်း Guthrie သူတို့သည်ဤတစ်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အခြေအနေတွင်နှင့်အတူသင်ယူဘူးသောအရာဤမျှလောက်များစွာသောပေါင်းစပ်, ကျောင်းသားများတစ်ဦးအလွန်ဖန်တီးမှုနှင့်ပျော်စရာအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့အတှကျအံ့သြစရာအခွင့်အလမ်းခဲ့တယ် "မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်များအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည်! "
ပထမနေရာ: Ayurvedic စားဖိုမှူး Project မှ: အာနန္ဒာ Subedi, Riwaj Rimal, Bibek Karki, ရီဂင် Rajak, Pradeep Basnet, Dheeraj နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး။ ဓာတ်ပုံ2ဒြေတို့ပါဝင်သည်။
ဒုတိယနေရာ: AgriVeda Project မှ: Sanjay Paudel အာဒံ Manandhar, Samir Karki, Surendra Maharjan, Hari K. Chaudhary, Shyamu Neupane ။ ဓာတ်ပုံ2ဒြေတို့ပါဝင်သည်။
တတိယနေရာ: ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဒဘဝက Project မှ: Shailesh Singh က Shree Raj Karki, Samrat Bhusal, Rikesh Karkee, Yubraj Pokharel, Tara Prasad Adhikari, တရားဓမ္မ Kshetri ။ ဓာတ်ပုံ2ဒြေတို့ပါဝင်သည်။
* Maharishi Ayurveda ရောဂါ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းများကို detect နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ချိန်ခွင်လျှာကိုဖန်တီးရန်လူသိများသဘာဝကာကွယ်တားဆီးရေး-oriented ဝေဒကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦးရှေးဟောင်းစနစ်ဖြစ်သည်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2016_01-01.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2016-01-23 19:09:122019-05-31 10:56:38DevFest 2015 ဆော့ဝဲပြိုင်ပွဲအောင်မြင်မှု
Sahar အဗ္ဗဒူလာ: အမျိုးသမီးများနေ့အိုင်တီပညာရေးအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2015 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by cre8or
ယီမင်၌ထကြီးထွားလာအများစုမှာအမျိုးသမီးငယ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အနည်းငယ်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ Sahar အဗ္ဗဒူလာ၏မိဘများသည်သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထက်တန်းကျောင်းအပြီးပညာရေးကိုဆက်လက် Sahar နှင့်သူမ၏အစ်မအားပေးအားမြှောက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကယုံကြည်ကြသည်, ဒါ။
Sahar ယီမင်မှာထိပ်တန်းအလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောကြောင့်, သူမအဲဂုတ္တုပြည်၌သူမ၏ဘွဲ့များအတွက်လေ့လာမယ့်ပညာသင်ဆုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ programming နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဘို့သူ့ကိုချစ်သောစိတ်သူမ၏အဓိကအဖြစ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံရွေးချယ်ဖို့ Sahar ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုင်ရိုတက္ကသိုလ်မှာသူမအောင်မြင်စွာကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်သူမ၏ဘွဲ့နှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များအတွက်မာစတာဘွဲ့ပြီးစီးခဲ့နှင့်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်က Cisco သည်ဒီပလိုမာပြီးစီးခဲ့သည်။
mum နေ LinkedIn တို့သတင်းစကားအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏ထူးခြားသောက MS အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပြီးနောက် Sahar တဦးတည်းမာစတာဘွဲ့အတွက်လုံလောက်သော-ပေမယ့်ခဲ့တဲ့ဒုတိယသခင်၏အလေးပေး OOP software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ကူးသူမ၏ဦးခေါင်းသို့အလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယျ။ ကြောင်းစဉ်းစားထားရှိမည် ဒါကြောင့်သူမကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်သုတေသနနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ငါတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး Facebook က အုပ်စုတစု။ Sahar အများအပြားအာရပ်ကျောင်းသားများကိုပျော်ရွှင်စွာနှင့်အောင်မြင်စွာဤအစီအစဉ်အတွက်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါသူမလျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်လျက်, အောက်တိုဘာလ 2014 entry ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။
သူမပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က mum ရောက်လာသည့်အခါတက္ကသိုလ် Sahar ၏ကနဦးစှဲကဒီမှာလူတိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့တာပါပဲ။ သူမသည်သူမ၏မိခင်ပြော "ဒီမှာလူအပေါငျးတို့ပြုံးနှင့် hi ဟုနေကြသည်!"
ကျောင်းဝင်းအပေါ်တစ်နှစ်ပြီးနောက် Sahar အဆိုပါ mum / ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါအသိုင်းအဝိုင်းအထူးသဘောသဘာဝအပေါ်ထင်ဟပ်: "ငါတကယ်ငါ In-တစ်ဦးမေတ္တာ, ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျင့်သုံး၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးခံစားခွင့်မှရရှိသောသူဖြစ်ကြောင်းကိုဤအငြိမ်းချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ် Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို။ ရုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ software ကိုပညာရှင်များအားလုံးအတူတကွ TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာနှင့်အတူဤရပ်ရွာထဲတွင်အသကျရှငျကိုယျတိုငျကငါ့ကိုများအတွက်ဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ "
သူမဝေးသူမ၏မိဘများနှင့်အစ်မထံမှဖြစ်တယ်, အလွန်သူတို့ကိုလွဲချော်သော်လည်း Sahar ရဲ့မိသားစုသူမက mum မှာအလွန်လုံခြုံပြီးလုံးဝထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏သိရန်စိတ်သက်သာရာရခြင်းဖြစ်သည်။
"ဖဲရ်ဖီးလ်တွင်နေထိုင်သောမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်, ငါန်းကျင်ကလူငါ့ကိုနှင့်အခြားသူများကိုလေးစားကြသည်ဟုခံစားရ," Sahar ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကကျွန်မရဲ့ပဝါဝတ်ဆင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, သူတို့ထဲကတစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုဆက်ဆံပါ။ ငါညှဉ်းဆဲခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။ သူငယ်ချင်းများမနက်စောစော (ကမွတ်စ်လင်အားလပ်ရက်) ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏နှင့်မနက်စောစောပဌနာခရီးစဉ်သည်ငါတို့အဘို့စီစဉ်ပေးနေကြတယ်။ "
Sahar လည်းကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်တွင်အဆိုပါပညာရှင်များနှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ပြီ: "ဒီအစီအစဉ်ကိုရဲ့မြင့်မားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများအားကောင်းတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖန်တီးပါ။ ကျွန်မအပင်တစ်ပင်နှင့်တူဤအစီအစဉ်မှကြည့်ရှု: သင်အမျိုးအနွယ်, ရေကြောင့်စိုက်ထားနှင့်ဂရုစိုက်။ သိကျွမ်းခြင်းပညာအတွင်းလာတာနဲ့အမျှ, သင်သည်အစဉ်အမြဲအသီးအပွရဖို့။ ပညာရေးအစီအစဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်စိန်ခေါ်မှု၏အချိန်လေးအတွင်း, ဒါမှမဟုတ်အချိန်လေးအောင်မြင်မှုတစ်ခုခုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုအလွန်စိန်ခေါ်မှုခဲ့ကြသည်, သို့သော်ယခုငါပြီးဆုံးသူဖြစ်ကြောင်းကိုငါအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်း၌ငါ့သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်၏။ "
အခြားအမျိုးသမီးဆော့ဝဲ Developers များအတွက်အကွံဉာဏျ
"အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုအလုပ်ခံရဖို့ဖြစ်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဘို့အအသုံးဝင်သောခံစားရတယ်။ ငါသူတို့ဖန်တီးမှုတွေဟာခံစားရသူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသမီး software ကို developer များပြောပြလိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းများအပြည့်အဝနှင့်အိပ်မက်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အခွက်-မှာ mum ဖော်ပြနိုင်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုရှာတွေ့ကြပြီမဟုတ်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ထောက်ခံမှုနှင့်အသိပညာရရှိမည်မယ်လို့ နှင့်အရည်အသွေး။ "
ဇန်နဝါရီလမှာတော့ Sahar မှာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်သူမ၏အိုင်တီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်မည် Intel က အော်ရီဂွန်အတွက်သူမတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်မှာ။ သူမရဲ့အလုပ်အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်ကုန်သို့ဒီဇိုင်းများပြောင်းလဲလျက်, Microprocessor များအတွက် system-on-ချစ်ပ်များနှင့် chip ကိုစုံဖှံ့ဖွိုးတိုးတစမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးမိသားစု၏အခြားအထူးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်သူမ၏အကြီးပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2015_12-01.jpeg 284 462 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2015-12-19 19:59:472018-04-20 15:47:09Sahar အဗ္ဗဒူလာ: အမျိုးသမီးများနေ့အိုင်တီပညာရေးအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်
သြဂုတ်လ 24, 2014 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
Zheng ယန်အသိပညာအဘို့ခိုင်ခံ့, ရေငတ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် excel မှဆန္ဒရှိပါတယ်။
မတိုင်မီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းရန်, Zheng တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက်ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အကြောင်းကို2နှစ်ပေါင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကပညာရေးဆိုင်ရာသင်ယူမှုနှင့်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အလမ်းများကိုပေါင်းစပ်ပြီးတစ်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်ကိုရှာနေတော့တာပဲ။ သူကစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာပညာရှင်များအဘို့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်က MS အကြောင်းကိုကြားသိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူကလျှောက်ထားဒီမှာဖေဖော်ဝါရီလ 2010 ၌မိမိလေ့လာမှုများစတင်ခဲ့ပါသည်။
နေဆဲတစ်ခု mum ကျောင်းသားနေစဉ်, Zheng ယန်ပြီးသား laudable ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ မိမိအ On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများပြီးစီးပြီးနောက် Zheng တစ်ခု immersive မီဒီယာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ် San Francisco မှာ Snibbe Interactive မှမှာ interned ။ ထိုအရပ်၌ဖြစ်သူ Scott Snibbe ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတက်လာသောကွန်ပျူတာရူပါရုံကိုနည်းပညာ၏ရှေ့ဆောင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတယ် "Gravilux ။ "
Gravilux: Microsoft က App ကို Featured
Gravilux တစ်ဦးအပြန်အလှန်ဂီတ starfield Visual ဖြစ်ပါသည်: ကဂီတ, ကာတွန်း, အနုပညာနှင့်သိပ္ပံပညာ၏ပေါင်းစပ်ပါပဲ။ သငျသညျမျက်နှာပြင်ကိုထိအမျှဆွဲငင်အားသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှ simulated ကြယ်ပွထားပါတယ်။ သငျသညျမာရ်နတ်နှင့်လိမ်အဆိုပါအမှုန်နဂါးငွေ့တန်းသို့, ဒါမှမဟုတ် အကယျ. စူပါနိုဗာကဲ့သို့သူတို့ကိုငါပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မြန်နှုန်းအားဖြင့်ကြယ်အရောင်, သူတို့ကခုန်စေ။ IOS ကိုများအတွက်ဗားရှင်းအောင်ပြီးနောက် Zheng က Windows 8 များအတွက် Gravilux တစ်ဗားရှင်းရာတွင်ဆာပခဲ့သည်။ Windows အ Store က "Entertainment က" အမျိုးအစားထဲမှာ 50,000 apps များထဲက Microsoft က Gravilux feature ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Snibbe မှာအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေစဉ်, Zheng လညျးမိမိ mum က MS အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အကွာအဝေးပညာရေးသင်တန်းများပြီးပါကခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်သူသည်စာအုပ်က Windows Phone7XNA ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်။ က Windows Phone များအတွက်ဂိမ်းပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့စာအုပ်တွေအချိန်တွင်ရှိခဲ့သည်သောကြောင့်, သူသင်ယူခဲ့ရာဝေမျှချင်တယ်။ အရေးအသားနှင့်တည်းဖြတ်၏ 17 လအတွင်းပြီးနောက်, စာအုပ်တစ်စာရွက်-based ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်စတိုင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက်တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းအတွက်အမှုအရာကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပါရှိသည်။ အဆိုပါစာအုပ်ကို C # နှင့် object-oriented programming အခြေခံအသိပညာရှိသည်, နဲ့ Windows Phone7များအတွက်ဂိမ်းဖန်တီးလိုသူများအတွက်ဂိမ်းပရိုဂရမ်အယောင်ဆောင်ဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ reviews အတော်လေးအပြုသဘောခဲ့ကြပြီ။
Zheng ယန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လက်တွေ့ကစားအတွေ့အကြုံများပေးနိုငျသောဗီဒီယိုဂိမ်းအင်ဂျင်အောင်နှင့်ကွန်ပျူတာဂီတနှင့်ပန်းချီထုတ်လုပ်ပြီးဖန်တီးပေးသော "ယေဘုယျအားဖြင့်အနုပညာ," ဟုခေါ်အသစ်တစ်ခုအနုပညာပုံစံဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝင်သည်။ mum မှာမိမိ MSCS အစီအစဉ်ကို Zheng အကျိုးရှိစွာ algorithms နှင့်အတူဂိမ်းအင်ဂျင်များ၏ဗိသုကာဒီဇိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အားပြန်လည်စဉ်းစားရန်ခွင့်ပြုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအများဆုံး mum မှာအဆင့်မြင့် Programming ဒီဇိုင်း, Computer ကိုဂရစ်ဖစ်များနှင့်အယ်လဂိုရီသမ်သင်တန်းများအားဖြင့်နှိုးဆွပေးလျက်ရှိသည်။
Zheng အထူးသဖြင့်အပျနှံများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီစည်းကမ်း၏နက်ရှိုင်းသောကြေးဇူးတငျကွောငျးအဘို့အခွင့်တစ်ဦးချင်းစီလတစျခုသင်တန်းအချိန်ပြည့်လေ့လာနေ၏ mum ပိတ်ပင်တားဆီးမှု system ကိုတန်ဖိုးထား။ သူအေးဆေးတည်ငြိမ်များအတွက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းစွာကျောင်းဝင်းလေထုစံပြတွေ့လေ့လာနေအာရုံစူးစိုက်။
၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်အတွက်တခြားဆော့ဗ်ဝဲ developer များကူညီပေးဖို့, Zheng ကွိုးစားအားထုများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်လူတွေကိုအကြံပေး။ လူများ, သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပျော်မွေ့နေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်, ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး, သူတို့ကိုယ်သူတို့စိန်ခေါ်, ကောင်းစွာအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အကောင်းမြင်ရှိနေဆဲသငျ့သညျ။
Zheng အဆိုပါ Transcendental Meditation® technique ကိုကျင့်သုံးမယ့်အေးဆေးတည်ငြိမ်, စိတ်အေးလက်အေးစိတ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံခြင်းနဲ့ productivity မှဦးဆောင်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆူညံကမ်ဘာပျေါတှငျ Self-အသိပညာပိုကောင်းစေပါတယ်ကပြောပါတယ်။
(1) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်း Programming, နှင့် (2) လုပ်ငန်းဗိသုကာ: ဧပြီလ၏အစဒီနှစ်မှာ Zheng ကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုအပိုဆောင်းသင်တန်းများယူ mum သို့ပြန်သွား၏။ အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူမိုဘိုင်းပရိုဂရမ်လက်ရှိနည်းပညာအတွက်အဓိကစီးကြောင်းတစ်ခုကြောင့်, သူသည်သာက Windows Phone နဲ့ IOS ကိုအပေါ်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်ကွောငျ့, Zheng က Android programming ကိုလေ့လာသင်ယူရန်မိုဘိုင်းပရိုဂရမ်သင်တန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/MUM-Student-Achieves-Success-Zheng-Yang.jpg 283 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2014-08-24 18:56:262019-05-31 10:57:14ကျောင်းသားအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း
Software Engineer, ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရှင်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2013 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
ကျွန်ုပ်တို့၏ MSCS ကျောင်းသား Intern များဟာသူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အိုင်တီရာထူးအတွက်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကအစလိုအပ်သောအကွာအဝေးပညာရေးသင်တန်းများယူပါ။ ရလဒ်အဖြစ်အများဆုံးကျောင်းသားများကိုအခြားမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများထွက်ခွာနည်းနည်းအချိန်ကိုရှာပါ။ မိုဟာမက် Sobhy MA Farag တစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကထိပ်အိုင်တီရှိကြောင်း Pittsburgh, Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက်ကုမ္ပဏီတိုင်ပင်, သူ၏အကွာအဝေးပညာရေးသင်တန်းများအတွက်တစ်ဦးရဲ့ဝင်ငွေများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်, သို့သော်မိုဟာမက်ပညာလှုပ်ရှားမှုများနံပါတ်ကိုလိုက်ရန်အချိန်ယူဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ မသာ
မိုဟာမက်မြောက်ပိုင်းအဲဂုတ္တုပြည်၌မြို့ငယ်လေးတွင်မွေးဖွား, နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျမူလတန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကိုအားဖြင့်သူကအထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံး, သူဆော်ဒီအာရေဗျမှာထိပ်တန်းတစ်ဆယ်ကျောင်းသားများအကြားဆဋ္ဌမအဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဤကာလအတွင်းမိုဟာမက်ကွန်ပျူတာများအားဖြင့်မှုတ်သွင်း, သူသည်သူကွန်ပျူတာစက်တွေနှင့် operating system မြား၏ဗိသုကာအပေါ်အထူးပြုဘယ်မှာ Menoufia တက္ကသိုလ်အတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံလေ့လာအဲဂုတ္တုပြည်မှပြန်လာသောဖြစ်လာခဲ့သည်။
Menoufia တက္ကသိုလ်တွင်တတိယအဆင့်အားဖြင့်, မိုဟာမက်ဟာအပေါ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည် FreeBSD ပံ့ပိုးစာရင်းဖြစ်သည်။ သူသည် dynamically ပြေးအချိန်တွင် FreeBSD kernel ကို module တွေ loading တစ်ခုချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ ဤစီမံကိန်းများ၏ရလဒ်အဖြစ်သူ Code ကိုဆုတစ်ခုက Google နွေရာသီချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ မိမိအအကျိုးစီးပွားအတွက် node ကိုဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးမှ, နှင့် node ကိုဆက်သွယ်ရေးအဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Menoufia တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်ခြင်းအားဖြင့်, သူသည်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များလေ့လာ CCNA အကယ်ဒမီလက်မှတ် (Cisco Certified Network Associate) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မေလ 2011 မှာတော့သူကတစ်တန်းနှင့်အတူဘွဲ့ရ ဂုဏ်ပြုဘွဲ့နှင့်အတူ Excellent က.
2010 နှင့် 2011 စဉ်အတွင်းမိုဟာမက်အများအပြားဂုဏ်ထူးရရှိခဲ့:
"အကောင်းဆုံး Programming စီမံကိန်း" Renewable Energy ညီလာခံ, အီဂျစ်, 2010 အတွက်ပထမနေရာ။
Code ကိုဆုချီးမြှင့်, Google 2010 ၏ Google ကနွေရာသီ။
"အကောင်းဆုံး Programming စီမံကိန်း" Renewable Energy ညီလာခံ, အီဂျစ်, 2011 အတွက်ပထမနေရာ။
အဲဂုတ္တုပြည်၌ 20 အတွက်ထိပ်တန်း 2011 အင်ဂျင်နီယာများ။
ArabBSD စီမံကိန်းကို (- လက်ရှိဒီဇင်ဘာလ 2010) မှာနည်းပညာပိုင်းခဲ။
Google ကရေးသားသူ Group မှ (- လက်ရှိဇန်နဝါရီလ 2011) မှာစည်းရုံးရေးမှူး။
သြဂုတ်လ 2012: မိုဟာမက်ဆောင်းပါးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, "kernel ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုအတွက် multicore ပြောင်းလဲနေသော kernel ကို module တွေပူးတွဲဖိုင်ကို technique ကို"ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ & သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများနိုင်ငံတကာဂျာနယ် (IJCSIT), vol4အတွက်မရှိ 4, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အောက်မှာဦးစီးဌာနမှကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏။
ဒီဇင်ဘာလ 2012: သူကထုတ်ဝေခဲ့သည်, "တစ်ခုတိုးမြှင့် Run-အချိန် kernel ကိုအမြင်အာရုံ debugger"ဟုအဆိုပါကို IEEE 8th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာညီလာခံ (ICENCO) တရားစွဲဆိုထားအတွက်လည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အောက်မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2013: မိုဟာမက်တရားဝင် Dalian တရုတ်နိုင်ငံ, ဇွန်လ,2ကျင်းပစေမည်အကြောင်း, လွန်မြောက် InfoTech-2013 ၏ BIT ရဲ့ 2013nd နှစ်ပတ်လည် World Congress မှာ "အရေးပေါ်မိုဘိုင်း Applications ကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ" ပေါ်တွင်အဲဒီ session မှာစကားပြောဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
မတ်လ 2013: မိုဟာမက်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကို "Operating System ကို Paradigm ထံမှရေးနည်း" ဟု multidisciplinaric ထုံးစံ၌သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေး၏အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခြင်းအသစ်တခုစာအုပ်တစ်အခနျးကွီးအဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း "multidisciplinary" ဆိုလိုသည်မှာအစားစင်ကြယ်သောလုံခြုံရေးအကြောင်းအရာများကမ်းလှမ်း၏ဖိုင်စနစ်များ, အဆန်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌လုံခြုံရေးမိတ်ဆက်အခြားစည်းကမ်းများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးခေါင်းစဉ်၏တင်ဆက်မှုဖော်ပြသည်။ လောလောဆယ်, သူ့အခနျးမှာကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအတွက်အထူးပြုတဲ့သူတော်တော်များများပါမောက္ခများကပြန်လည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
ဧပြီလ 2013: သူကမေရီလန်းမှာ "အရေးပါ DOD Initiatives ညီလာခံများအတွက် cloud computing & အာမခံချက်" အမေရိကန်ဦးစီးဌာနကာကွယ်ရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့် mum တက်ရောက်ရန်?
သူကကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌သူ၏မာစတာဒီဂရီများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်. အဘယ်ကြောင့်ဟုမေးသောအခါ, မိုဟာမက်ဘွဲ့ရလေ့လာမှုများအတွက်ရွေးချယ်မှုကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည် "ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ပရိုဂရမ်အများစုခြေရာခံခြင်းစျေးကွက်လိုအပ်ချက်များ၏စွမ်းရည်ကိုလက်လွတ်။ ယင်းသီအိုရီသုတေသနနှင့်လက်တွေ့ဘဝအကြားကွာဟမှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့စက်မှုအရည်အသွေးတွေချို့တဲ့သည်အခြားတက္ကသိုလ်များ '' အရှင်ဘုရားရဲ့ကျောင်းသားများကိုရှိသည်ဘယ်မှာငါ၏အသစ်ကိုအလုပ်ခွင်၌ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ၏အရှုထောင့်ကနေ mum အမေရိကန်စျေးကွက်အတွက်လိုအပ်သောအသှေးမြားနှငျ့အတှေ့အကွုံမြားနှငျ့ကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်နေအတွက်ထိပ်တန်းနေရာများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ငါ mum မှာငါ့အပေါ်-ကျောင်းဝင်းလေ့လာမှုများစဉ်အတွင်းသွယ်ဝိုက်စက်မှုအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့, ငါသင်တန်းခန်းထဲမှာရှိခဲ့သောအရာကိုဆင်တူသည်ငါ့အလုပ်အတွက်များစွာသောအခြေအနေများရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီ။ "
အဆိုပါTM® technique ကိုကျင့်သုံး၏ကောင်းကျိုးများ
"ပညာရေးအရည်အသွေးတွေနဲ့အတူ Self-ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အာရုံစိုက် mum မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Transcendental တှေးတောဆငျခွ [အားလုံးကျောင်းသားများအနေဖြင့်လေ့ကျင့်, mum မှာဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများ] ဘုံ Self-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ technique ကိုအဖြစ်ကြှနျုပျအတွင်းစွမ်းရည်နားထောင်ရန်, ငါ့စိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ "
မိုဟာမက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်: "ကြွင်းသောအရာနှင့်လှုပ်ရှားမှုသံသရာအဆိုအရ, ငါမကြာမီပညာသင်နှစ်လေ့လာမှုများဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့စီစဉ်တာပါ။ ငါတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံငါ၏အစနစ်တကျစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလမ်းသစ်တွေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ပါရဂူဘွဲ့များအတွက်လေ့လာဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ "သူကသူ့ပါရဂူဘွဲ့များအတွက် MIT ကစတန်းဖို့ဒ်နှင့်ဂျီ-ဖရဲသီးစဉ်းစားနေပါတယ်။
"စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အမေရိကန်အိုင်တီဈေးကွက်ထဲမှာထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းရာထူးများအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင်ပေးသောထိပ်တန်းပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်အိုင်တီလောကရှိခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ချင်လျှင်သင် mum ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ "
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/Mohamed-Sobhy-software-engineer.jpg 527 858 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2013-12-24 18:48:062019-05-31 10:57:07Software Engineer, ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရှင်